एकदशकसम्म किन लुके अनिल अम्बानी? भन्छन्-अफ्ठेरोलार्इ अवसरमा बदल्ने कोशिश गरें! :: BIZMANDU
एकदशकसम्म किन लुके अनिल अम्बानी? भन्छन्-अफ्ठेरोलार्इ अवसरमा बदल्ने कोशिश गरें!
प्रकाशित मिति: Jan 4, 2018 4:51 PM
मुम्बइ। भारतीय अर्बपति ब्यापारी अनिल अम्बानी हिजोआज फेरिएका छन्। भारतका प्रशिद्ध ब्यापारी धिरुभाइ अम्बानीका कान्छा छोरा तथा रिलायन्स ग्रुपका मालिक अनिल एकदशकपछि मात्र मिडियासामु खुले।
एक दशकसम्म सबैबाट टाढिएका उनी भन्छन्- ‘जब मानिस अफ्ठेरोमा हुन्छ त्यसबेला थाहा पाउँछ को आफ्नो हो अनि को झुठो।’
भारतमा अम्बानीको ब्यवसाय देशकै पहिलो नम्बरमा थियो। दाजुभाईबीचको अंशबण्डाले अम्बानीको बिरासत टुक्रियो।
सुरुदेखि नै भाइ अनिलको ब्यवसाय ओरालो लाग्दै गयो। उनको कम्पनी रिलायन्स टेलिकम र त्यसका तीनजना कार्यकारीहरु टु जी घोटाला काण्डमा समेत मुछिए ।
ब्यबसाय ओरालो लाग्दै गयो। बिभिन्न बैंकहरुबाट उनले लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था उनी पुगे। चिनियाँ बैंकले त ऋण असुलउपरको लागि अदालतमा मुद्दा नै दायर गर्यो।
उनले ‘मिडिया’ बिजनेस बन्द गरे। ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ बिजनेसबाट हात झिके। ‘पावर’ बिजनेसबाट बाहिरिए। धेरैतिरबाट खुम्चिन पुगेका अनिल अम्बानीले केही समय अघि मात्रै टु जी काण्डबाट सफाइ पाए। सफाइ पाएपछि उनले भने- ‘आखिर सत्यकै जीत हुन्छ।’
एक दशकमा पहिलोपटक मिडियासामु आएका अनिलले भने-‘अफ्ठरो अवस्थामा नगण्य मानिसमात्र मेरो वरिपरि थिए। मानिसहरु मेरो फोन रिसिभ पनि गर्दैनथे। मसँग नाता छ भन्न पनि रुचाउँदैनथे। यस्तो अवस्थामा कोही पनि म निकट रहन चाहेनन्।’
फोर्ब्सको सूचि अनुसार सन् २०१७ मा भारतका धनीमध्ये अनिल ४५ नम्बरमा रहेका थिए। यो लिस्टको पहिलो नम्बरमा उनकै दाजु मुकेश अम्बानी थिए।
के उनलार्इ धनी र चर्चित हुनु महंगो परेकै हो त? उनी भन्न थालेका छन् – ‘न त म धनी छु न चर्चित नै। म केवल साधारण मानिस मात्र हुँ।’
अफ्ठेरो अवस्थालार्इ अवसरको रुपमा बदल्ने कोशिश गरेको बताउने अनिल अहिलेपनि ४५ हजार करोड भारुको ऋणले थिचिएका छन्। उनले हालै आफ्नो कम्पनीलार्इ ऋणबाट बाहिर निकाल्न सुधारका योजनाहरु समेत सार्बजनिक गरेका थिए।
अनिलले वायरलेस बिजनेस बन्द गरेर रिलायन्स कम्युनिकेसन्सको मूल शेयर जोगाएका छन्। रिलायन्स कम्युनिकेसन्सले वायरलेस बिजनेस आफ्नै दाजु मुकेश अम्बानीको रिलायन्स जियो इन्फोकमलार्इ २४ हजार करोड रुपैयाँमा बेच्ने सम्झौता गरिसकेको छ। यो डिलबाट कम्पनीको ४५ हजार करोड रुपैयाँ ऋण घटाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
एकदशकसम्म किन लुके अनिल अम्बानी? भन्छन्-अफ्ठेरोलार्इ अवसरमा बदल्ने कोशिश गरें! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।